Yonke intombazana iphupha ukuba ibonakale imnandi kwaye idonsa. Kwaye kukho isizathu salokhu. Emva kwakho konke, xa uhamba ngezitrato, kunye namadoda kunye nabasetyhini bakhangele kuwe, kuthiwa ngamnye uyazichukumisa. Kodwa ukuze ukhangele i-sexy, i-sensual and beautiful-makeup, izinwele kunye nezambatho ezikhazimulayo akwanele. Yintoni enokuyenza ukuba ubonakala ngathi uyinto eqhelekileyo, ngaphandle ... ubunzima kunye namafutha atsala kwiqhonqo? Masiqonde indlela yokukhawuleza ukulahleka ubunzima kwaye ubukeka buhle ?
Nantoni na into abayithethayo ngawe kwaye ungacingi ukuba abantu abajikelezileyo, awuyi kubathanda bonke abantu. Akukho nto enjalo, kwaye ayizange ibe khona. Umntu ngamnye unalo uhlobo lwakhe, kwaye ngamnye wethu unomdla wakhe.
Ukuba ukhathalele ngamasentimitha angaphezulu kwiqhonqa kunye nasezinqeni, ungawasebenzisa ngelungelo. Ngokomzekelo, ungabhalisa kwiklabhu yemidaniso yase-Arabhu. Ndikholelwe, kuba umntu onjengawe kukho indawo.
Kodwa ukuba uphazamiseke ngokwenene ngamangentimitha akho, kufuneka uqaphele ingqalelo konke oku.
Into yokuqala efika kwingqondo yakho kukuphucula ukutya kwakho. Emva kwakho konke, nje ekudleni kwaye yonke impilo yakho isetyenziswe. Ukuba uthanda ukutya kakuhle, oku akuthethi ukuba unokufumana iikhilogram zamazambane ezatyiweyo kunye neebabs ngeveki. Kufuneka nje uhlawule umvuzo kwaye uqonde ukuba into ephambili kwisondlo somntu ayikho into edla ngayo, kodwa ingaba idla ukutya okulungileyo.
Ngegama elithi "imveliso elungileyo" okokuqala sithetha ukusetyenziswa kweentshisi ezifakwe ngokutsha, imifuno emitsha, iziqhamo ezintsha, imifino kunye nomgangatho ongeyomzimba onomsoco, umzekelo - i-turkey okanye inkukhu ekudleni.
Ukuba awukwazi ukumelana namaqebelengwane, uya kufuneka usebenzise umzimba. Emva koko, ngaba wakha wacinga malunga nokutya okunikezelwa kumntu? Awuzange ucinge ngako? Ngeze, ulahlekelwe kakhulu. Kwaye siya kukuxelela ngoku iinkcukacha ngoku ukutya okubalulekileyo kwaye kutheni kubaluleke kakhulu kumntu.
Indoda ngokusisiseko sayo, njengesilwanyana, kwaye oku kungokwemilinganiselo ethile. Nantoni na eyenzekayo, umntu kufuneka adle kwaye, ngokubaluleke kakhulu, adle amanzi amaninzi ekudleni. Umbane ulayisha kwakhona isisu, ngoko ke uqala ukusebenza njengeyure, kodwa oku kuyenzeka xa umntu echitha amanzi ubuncinane ama-1.5 ilitha ngosuku.
Ukuthi inyama iyazibona ephakamileyo kwaye yayigcwele amandla, ngenxa yale njongo, sanikwa ukutya, abantu. Emva kwakho konke, ngokuqinisekileyo awuzange ucingisise ukuba kutheni ama-deposit deposits afumaneke kwiindawo ezikubonakalayo nakwiindawo ezilungileyo zebhinqa. Kwaye konke kuxhomekeke kwindlela esiphila kuyo. Ukuba sichitha ubusuku ngendlala ebhedeni, umzekelo, njengam, kwaye udle kakhulu, oku kuya kuba isizathu sokuqala sokuhlaziya ukutya kwabo, ukutya kwabo kwansuku zonke. Asiyisebenzisi nje loo mandla, okumele agcwaliswe ngokutya okuhlwayileyo kunye okunempilo. Khangela, sihleli usuku lonke eofisini, kwaye amandla ethu, ewe, ngokuqinisekileyo, kufuneka sichithe, ayinakucinywa, kuba sihleli kwaye asihambeli. Lo ngowokuqala.
Kwaye okwesibini kukuba xa singasisebenzisi amandla, ukutya okuncinane esiyidingayo. Kodwa ingqondo yomntu ayiyiqondi kakuhle le nto, kwaye ngoko sihlala sifuna ukutya kunye neekhalori ezinkulu. Kule nto nathi siyabandezeleka. Emva koko, into esiyibonayo ekubonakalisweni kwesibuko ihagu enamafutha, izonda impilo ephilileyo (kuba ivila kakhulu ukuba ihambe) kwaye iyamthiya amantombazana amancinci ukuba abe mncinci kwaye omncinci, kwaye u-zhirtrest. Yile ndlela ukuzithemba kwethu kuqhubeka ngayo kwixesha elizayo.
Ukuze ukhawuleze ulahlekelwe isisindo kwaye uhlale uhle - lungisa ukutya kwakho, zizinakekele kwaye kubaluleke kakhulu - phucula. Emva koko inqweno yakho iya kuba nombulelo kuwe, kwaye emva koko iya kubeka ingqalelo kumadoda kuwe!
Ibharari yeBhodi: ukuqeshwa kunye nokuzibandakanya nayo
Ngokukhawuleza ukususa ukukhathala nokukhawuleza ufumane amandla
I-Gymnastics yokulahlekelwa ubunzima ekhaya
Ngaba ndiyakuthabatha isilwanyana esiphathekayo ngexesha lokukhulelwa?
Amafritsi kunye nesipinashi kunye neepasta eziluhlaza
UAlbina Dzhanabaeva waphuma ngeentloko ze-naked naked
I-jam ye-Aromatic esuka ku-feijoa, iresiphi ngesithombe
Indlela yokususa umgxobhozo ngaphantsi kwezilwanyana zamanyathelo ezipikili
Ifayile yengulube nge thyme
Ingqungquthela entlabeni yesanti